Global Voices teny Malagasy » Japana Sy Ny Serizy Mamelana Mahafinaritra Ao Aminy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Avrily 2016 5:07 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mediam-bahoaka, Saripika, Tontolo_iainana, Vaovao Tsara
Yoshino , ao amin'ny prefektioran'i Nara ao atsimo, no iray amin'ny toerana malaza indrindra (sy sarotra andehanana indrindra) ijerena ny famelan'ny serizy.
Inty ny “hazo malahelo” serizy  malaza akaikin'ny tanànan'ny mpanjono ao Obama , tokony ho roa ora ao avaratr'i Kyoto.
Nampilaharana hazo serizy, izay hazavaina amin'ny alina ny famoniny, ny tokotanin'ny tranomanda ao afovoan-tanànan'i Fukui  manaraka ny morondranomasin'i Japan.
Zaridainan'i Ueno  ao Tokyo angamba no toerana malaza indrindra fijerena ny famelan'ny serizy ao amin'ny faritra manodidina an'i Tokyo, raha tsy manerana an'i Japan. Isaky ny lohataona, olona an'hetsiny no mitsidika ny zaridainan'i Ueno hijery an'izany serizy mamelana izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/04/81001/
 “hazo malahelo” serizy: http://hanami.walkerplus.com/detail/ar0518e60414/
 Zaridainan'i Ueno: https://www.instagram.com/explore/tags/%E4%B8%8A%E9%87%8E%E5%85%AC%E5%9C%92/